Dhukkuba sukkaraa fii madaa faanta jalaa | Oromia Shall be Free
bilisummaa May 22, 2022	Comments Off on Dhukkuba sukkaraa fii madaa faanta jalaa
DHUKKUBA SUKKAARAA FI MADAA LUKAA – (Diabetic Foot Ulcer)
by Kedir Abdulatif
Balaa tasa nama mudatutti aansee fayyaa qaamaafii lubbuu baraaruuf jecha sababa miilli dhukkubsate nama irraa muramuuuf keessaa inni jalqabaa madaa koomee-lukaa nama Dhukkuba Sukkaaraa qabu irratti mudatuudha. Dhukkubsattoota Sukkaaraa keessaa %15 kan ta’an madaan kun isaan mudachuu danda’a.
Akkuma woliigalaatti xaxaawwan Dhukkubni Sukkaaraa namatti fidu garagaraa irraa ka’uun madaan nama Dhukkuba Sukkaaraa (DM) qabuu dafee fayyuu dhabuu, babaldhataa deemuu, Infeekshinii godhachuu, malaa guuruu, gara foonif lafeetti gad taruu fi haala salphaan foon gubbaa irratti du’uu (gangrene) godhachuuf daran saaxilamaadha.
Sababni uumaamuu madaa kanaa xaxaawwan dhukkubni sukkaaraa namatti fidu irraa kan dhufaniidha. isaanis:
Previous Ethiopia’s Tigray forces announce release of thousands of POWs
Next Biyya sirni haqa hin taane ture keessatti rakkoolee ummataa daawwitii wal qixxummaa qofaan furuun waan hin danda’amneef haqummaa diriirsuun dirqama